विश्वकप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर पराजित भएका १० टिम | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
विश्वकप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर पराजित भएका १० टिम
जेठ १०, २०७६ शुक्रबार १४:२४:४८ | एजेन्सी
सन् १९७५ देखि अहिलेसम्म विश्वकप क्रिकेटमा ११ वटा संस्करण पूरा भएका छन् । १२ औं संस्करण ३० मेदेखि इंग्ल्याण्डमा सुरु हुँदै छ । विश्वकप सुरु हुनु पूर्वका खेलहरु पनि शुक्रबारदेखि सुरु भएका छन् ।
क्रिकेट हो नतिजाको विषयमा तत्कालै आँकलन गर्न अलि अप्ठेरो पनि हुन्छ । कतिबेला बलर र ब्याट्सम्यानले खेलको पासा पल्टाउँछन् अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । तर सधैं राम्रो प्रदर्शन गर्ने टिमले जित मात्रै हात पार्छ भन्ने पनि छैन । आज हामीले विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गर्दा गर्दै पराजित भएका खेलको विषयमा जानकारी दिदैछाैँ ।
१. अस्ट्रेलिया भर्सेस दक्षिण अफ्रिका (१९९९)
विश्वकप १९९९ को सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका खेलेका थिए । यस खेलमा पहिला व्याटिङ गर्दै अस्ट्रेलिया २१३ रनमा अल आउट भएको थियो ।
२१४ रनको जवाफी लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको दक्षिण अफ्रिकाले उत्कृष्ट सुरुआत गरेको थियो । तर १७५ रन बनाउँदा उसले ६ विकेट गुमायो । त्यसपछि क्रिजमा आएका लस क्लूजनरले १६ बलमा आक्रामक ब्याटिङ गर्दै ३१ रन बनाएका थिए । तर अन्तिम बलमा रन रन लिँदै स्ट्राइक आफ्नो पक्षमा राख्ने लोभले उनी रन आउट भए । त्यसपछि लय बिग्रिएको अफ्रिकाले जित निकाल्न सकेन र म्याच नै बराबरी भयो ।
तर रन रेटमा अघि रहँदै अस्ट्रेलिया फाइनलमा पुगेको थियो । उक्त फाइनल अस्ट्रेलियाले नै जितेको थियो ।
२. न्यूजील्याण्ड भर्सेस अस्ट्रेलिया १९९६
भारतमा भएको १९९६ विश्वकपको चौथो क्वार्टरफाइनलमा न्यूजील्यायण्ड र अस्ट्रेलिया खेलेका थिए ।
न्यूजील्याण्डले पहिला व्याटिङ गर्दै २८६ रन बनाएको थियो । जसमा क्रिस हेरिसले १३० रनको शानदार पारी खेलेका थिए भने कप्तान ली जर्मनले ८९ रन बनाए ।
जवाफमा आक्रामक प्रदर्शन गर्दै अस्ट्रेलियाले ४७.५ ओभरमा जित निकाल्न सफल भएको थियो । यसमा मार्क वाले शतकीय पारि खेल्दै जित दिलाएका थिए । १९९६ मा २५० भन्दा माथिको स्कोर ५० ओभरमा रक्षा गर्न सकिने स्कोरमा लिइन्थ्यो ।
साथै न्यूजील्याण्डका हेरिसले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै शतक बनाए पनि उक्त खेलमा न्यूजील्याण्ड पारजित हुन पुग्यो ।
३. भारत भर्सेस श्रीलंका (१९६६)
विश्वकप १९९६ को समूह चरणको २४ औं खेलमा भारत र श्रीलंका खेलेका थिए । पहिला ब्याटिङ गर्दै भारतले २७१ रन बनाएको थियो ।
सचिन तेन्दुलकरले १३७ रन बनाउँदा कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीले ७२ रनको योगदान गरेका थिए । तर श्रीलंकाले भारतले दिएको २७२ रनको लक्ष्य ४८.४ ओभरमा पूरा गरेको थियो । श्रीलंकाको जितमा सनथ जयसूर्या र तिलकरत्ने दिलशानले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए ।
४. पाकिस्तान भर्सेस बंगलादेश (१९९९)
१९९९ को विश्वकपमो २४ औं खेलमा पाकिस्तान र बंगलादेश खेलेका थिए । पाकिस्तानले टस जितेर पहिला फिल्डीङ गर्ने निर्णय गर्‍यो । सुरुआती ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले २२४ रन बनाएको थियो ।
पाकिस्तानका सकलेन मुश्ताकले १० ओभरमा ३५ रन खर्चिएर ५ विकेट लिएका थिए । २२५ रनको लक्ष्य पछ्याएर मैदान उत्रिएको पाकिस्तान ४४.३ ओभरमा १५१ रनमा समेटिन पुगेको थियो । उक्त खेलमा निकालेको जित नै बंगलादेशको एक दिवसीय क्रिकेटको पहिलो जित थियो । बंगलादेश विजयी भएपछि सकलेन मुश्ताकको ५ विकेट खेल गएको थियो ।
५. अस्ट्रेलिया भर्सेस वेस्ट इण्डिज (१९७५)
विश्वकपको पहिलो संस्करणको फाइनलमा वेस्टइण्डिज र अस्ट्रेलिया खेलेका थिए । इंग्ल्याण्डको लर्डस मैदानमा भएको फाइनलमा अस्ट्रेलियाका बलर गेरी गिल्मर दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट खेल्दै थिए ।
उनले सेमिफाइनलमा इंग्ल्याण्डविरुद्ध १४ रन खर्चिएर ६ विकेट लिएर सनसनी मच्चाएका थिए । फाइनलमा पनि उनले वेस्टइण्डिजविरुद्ध ४८ रन खर्चिदैं ५ विकेट हात पारे । उनको धारिलो बलिङले वेस्टइण्डिज २९१ रनमा समेटियो । ६० ओभरमा खेलमा २९२ रनको लक्ष्य लिएर मैदान आएको अस्ट्रेलिया ५८.४ ओभरमा अलआउट भयो । त्यसपछि पहिलो विश्वकप नै वेस्टइण्डिजले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो ।
६. वेस्ट इण्डिज भर्सेस क्यानडा २००३
श्रीलंकाविरुद्ध आफ्नो पहिलो विश्वकपमा जम्मा ३६ रनमा अल आउट भएको क्यानडाको टिमले वेस्टइण्डिज विरुद्ध २०२ रन बनयो । जन डेविसनले १११ रनको शतकीय पारि खेले । तर वेस्टइण्डिजले उक्त लक्ष्य २०.३ ओभरमा पूरा गरेको थियो । जसका कारण जन डेविसनको शतक खेर गएको थियो ।
७. अस्ट्रेलिया भर्सेस न्यूजील्याण्ड ( २००३)
विश्वकप २००३ को सुपर सिक्सको पाँचौ खेलमा अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड खेलेका थिए । पहिले व्याटिङ गर्दै अस्ट्रेलियाले २०८ रन बनायो ।
न्यूजील्याण्डका शेन बन्डले १० ओभरमा २३ रन दिएर ६ विकेट लिए । साथै उनले २ ओभर मेडन पनि राख्न सफल भएका थिए । २०९ रनको लक्ष्य पछ्याएका न्यूजील्याण्ड ३०.१ ओभरमा ११२ रन बनाएर समेटियो । न्यूजील्याण्ड पराजित भएसँगै शेन बन्डको ६ विकेटको काम लागेन । तर उनले म्यान अफ दी म्याचको अवार्ड भने हात पारे ।
८. पाकिस्तान भर्सेस न्यूजील्याण्ड (१९९२)
विश्वकप १९९२ को पहिलो सेमिफाइनलमा न्यूजील्याण्ड र पाकिस्तान खेलेका थिए । पहिला ब्याटिङ गर्दै न्यूजिल्याण्डले २६३ रन बनाएको थियो ।
कप्तान मार्टिन क्रोले ९१ रनको शानदार पारि खेले । तर उक्त लक्ष्य पाकिस्तानले ४९ औं ओभरमा पूरा गरेको थियो । उक्त विश्वकप पाकिस्तानले जितेको थियो । त्यतिबेलाका कप्तान इमरान खान अहिले पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री छन् ।
पाकिस्तानविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने मार्टिन क्रोको टिम सेमिफाइनलमा पराजित भएपनि उनले म्यान अफ द सिरिजको उपाधि जितेका थिए ।
९. भारत भर्सेस दक्षिण अफ्रिका
विश्वकप २०११ के २९ औं खेलमा दक्षिण अफ्रिका र भारत भिडेका थिए । नागपुरमा भएको खेलमा भारतले पहिला ब्याटिङ गर्दै २९६ रन बनायो ।
सचिन तेन्दुलकरले १११ रन बनाउँदा विरेन्द्र सहवागले ७३ र गौतम गम्भीरले ६९ रनको योगदान गरेका थिए । सचिनले त्यतिबेला बनाएको शतक करियरको ९९ औं शतक पनि थियो । तर दक्षिण अफ्रिकाले २९७ रनको लक्ष्य ४९.४ ओभरमा पूरा गरेको थियो । समूह चरणमा दक्षिण अफ्रिकासँग हारेको भारतले पछि फाइनलमा श्रीलंकालाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो ।
१०. भारत भर्सेस श्रीलंका (२०११)
विश्वकप २०११ को फाइनलमा भारत र श्रीलंका भिडेका थिए । पहिला ब्याटिङ गर्दै श्रीलंकाले २७४ रन बनयो । महेला जयबर्धनेले १०३ रनको शानदार पारि खेले ।
तर भारका लागि गौतम गम्भीर ९७ तथा महेन्द्रसिंह धोनीले ९१ रन बनाएपछि भारतले विश्वकपको उपाधि नै जित्न सफल भयो । जसले गर्दा श्रीलंकाका जयबर्धनेको शतक खेर गयो ।
अन्तिम अपडेट: असोज १५, २०७६
युरोकप छनोटमा बेल्जियमले लगातार आठौँ जित
अरिङ्गाल खाँदा १० जना बिरामी, एक जनाको अवस्था गम्भीर
मैत्रीपूर्ण फुटबलमा इक्वेडरमाथि अर्जेन्टिनाको फराकिलो जित
भिक्ट्री लाउन्जबारमा लागेको आगो निभाइयो
राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण सम्पन्न, नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ युग...
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङकाे स्वदेश फिर्ती (फाेटाे फिचर)
साफ यू-१५ महिला च्याम्पियनिसप : भुटानसँग नेपालकाे बराबरी
ब्राजिललाई नाइजेरियाले १-१गोलको बराबरीमा राेक्याे
कांग्रेसको चियापान कार्यक्रममा कसले के भने ?
‘सिप्रदी ट्रेनिङ सेन्टरले अहिलेसम्म २६ हजार बढीलाई तालिम दिइस...
कांग्रेसको चियापान : तात्तातो समोसा,जेरी र नमकिन
सी एण्ड शो : आफ्नो नाम र नेपालीको काम देखेर सी जिनपिङ तीनछक्क !
यसरी उदाए सी जिनपिङ : गुफादेखि विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रपतिसम्म
राष्ट्रपति सीको घोषणा : नेपाल अब भूजडित देश हुन्छ
रात्रिभोजमा सहभागी हुनेलाई पोशाकदेखि खानासम्मको नियम : चिनियाँ राष्ट्रपतिले खान सुरु गरेपछि मात्रै खानुस् !